We Fight We Win. -- " More than Media ": လက်ပတောင်းတောင်မှာ ဘုန်းကြီး ဒဏ်ရာရတဲ့ပုံကို မိထိလာမှာ မူစလင်က သတ်တာ ဆိုပြီး ၀ီရသူသတင်းမှာဖြန့် တာ ၀န်ခံ ပြီ
လက်ပတောင်းတောင်မှာ ဘုန်းကြီး ဒဏ်ရာရတဲ့ပုံကို မိထိလာမှာ မူစလင်က သတ်တာ ဆိုပြီး ၀ီရသူသတင်းမှာဖြန့် တာ ၀န်ခံ ပြီ
ဒေဝဒတ်ဉာဏ်နဲ့ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်တဲ့အထိ ကူးစက်သွားအောင် ဖန်းတီးတဲ့ ဝီရသူ ဝန်ခံလုိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ဝံခံမှုကို ဖေစ်ဘုတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်။
မိတ္ဘိလာမှာ ပြဿနာတွေ စဖြစ်တဲ့နေ့ မူဆလင်တွေက အက်ဆစ်နဲ့ပက်ပြီး မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ မီးလောင် ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတပါးဓါတ်ပုံ ဖေ့စ်ဘုတ်တွေမှာ တင်လာတာကို အားလုံးသတိထားမိကြမှာပါ။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံဟာ လက်ပံတောင်း အရေးအခင်းတုန်းက မီးလောင်ဗုံးထိထားတဲ့ ကိုယ်တော်တပါးရဲ့ ဓါတ်ပုံတပုံကို သူကိုယ်တိုင် အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ဝီရသူ ဝန်ခံလိုက်ပြီ။
မိတ္ထီလာက ပုံမရလို့လက်ပန်းတောင်းက ပုံကို ယူသုံးပါတာ ဘာပြဿသာနာများ ရှိလို့ လဲလို့ သူက ဆင်ခြေပေးပါတယ်။ သူဖြန့် လိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံကြောင့် လူတွေဒေါသကိုထိမ်းမရအောင်ဖြစ်ပြီး အပြစ်မဲ့တဲ့ မူစလင် ကလေးသူငယ်များအပါအ၀င် ၂၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Credit: Peace for all
ကိုယ့်လူလဲ ဖွတာတွေ ရပ်တော့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကောသတိထားမိရဲ့လား၊
အောက်က ကလေးနဲ့ အမေ ပုံလဲ မိတ္ထီလာက မဟုတ်ပါ။
You are finished. You are the one who instigate against Buddhist. Do you aware that? You are hopeless and doomed. What did you do for the people and country so far.
25 March 2013 at 07:31
အမှန်တရားဘက်မှာ ဘုရားသခင်ရှိပါတယ်ဗျာ..။လူသားအားလုံးငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ...။